Mpamokatra sy mpamatsy solosaina - Slides latabatra ao Sina
Kitapo latabatra fisakafoana fanitarana mandeha ho azy 35mm
Slide latabatra fisakafoana fanodinana mandeha ho azy 35mm namboarina tamin'ny milina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
35mm Dingana roa fanitarana latabatra fisakafoanana tsy misy fampifanarahana
Fampidirana:Ny latabatra fisakafoanana fihinanam-baravarana roa hetsy 35mm tsy misy fampandrenesana ataon'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
35mm fampitomboana indroa fampandrenesana latabatra fisakafoanana miaraka amin'ny hidy
Fampidirana:Ny latabatra fihinanam-baravarankely 35mm fanitarana indroa miaraka amin'ny hidy vita amin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Kitapo fanitarana latabatra 35mm Mitsangàna & lavo
Fampidirana:Ny horonan-tsarimihetsika fanitarana latabatra 35mm Rise & Fall izay vita tamin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Slide fantsom-pifandraisana 48mm fantsom-pifandraisana ho an'ny latabatra fisakafoanana indroa
Fampidirana:Ny sakany 48mm fantsom-pifandraisana telescopic ho an'ny latabatra fisakafoanana indroa vita amin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
48mm Solosaina fanitarana latabatra tokana
48mm teleskopaly mitondra latabatra fanitarana latabatra slide
Fampidirana:Ny 48mm teleskopaly mitondra latabatra fanitarana latabatra slide vita amin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
YA-4804 Slide fanitarana fantsom-pahitalavitra indroa-deck
Fampidirana:Ny latabatra fanitarana latabatra fantsona YA-4804 Double-deck vita amin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sombin-tsolika maromaro amin'ny fizarana latabatra (mekanika latabatra fanitarana)
Fampidirana:Ny fizarana maro momba ny latabatra mihetsika (latabatra miorina amin'ny latabatra) vita amin'ny masinina avo lenta. Manana sakamalaho 35mm sy 48mm karazany roa amin'ny slide extension extension amin'ny latabatra izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny mpihazakazaka latabatra ho an'ny latabatrao araka ny endrik'ilay latabatrao. Raha liana amin'ireo sary mihetsika momba ny latabatra fanitarana anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.